AKHRISO: Madasha Xisbiyada Mucaaradka DF Soomaaliya oo gudbiyey Dacwad ka dhan ah Fahad Yaasiin | SMC
Home WARARKA MAANTA AKHRISO: Madasha Xisbiyada Mucaaradka DF Soomaaliya oo gudbiyey Dacwad ka dhan ah...
AKHRISO: Madasha Xisbiyada Mucaaradka DF Soomaaliya oo gudbiyey Dacwad ka dhan ah Fahad Yaasiin
MUQDISHO(SMC) – Madasha Xisbiyada mucaaradka ee dawladda Faderaalka Soomaaliya ayaa dacwad ka dhan ah Taliyaha nabadsugidda Iyo Sirdoonka Soomaaliya u gudbiyey Madaxweynaha Jamhuuriyada & Raysalwasaaraha oo ay ku eedeeyeen in ay u shaqeynayaan sifo aan wanaagsaneyn.
Madasha ayaa sheegtay in ay ka walaacsan tahay sida loo maamulayay arrimaha Gudaha Nabadusgida Qaranka, waxayna sheegeen in dad badan oo wax ku ool ahaa shaqada laga ceyriyey si naalmarsan sharciyada dalka.
Madasha ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin xariirka Al- Shabaabiyo Hay’adda NISA ee baryahan dambe soo kordhay, waxayna sheegeen in ay u arkaan halis degd eg ah oo ay tahay in wax laga qabto.
Labo qodob oo deg deg ah ayay codsadeen madashu.
1- In baaritaan Madax banaan oo deg deg ah lagu sameeyo qaraxii ka dhacay xarunta gobalka Banaadir oo galaaftay nolosha Gudoomiyihii gobalka Banaadir Eng Yariisow.
2- In la baaro wada hadalada rasmiga ah ee habeen kasta dhexmara Al- Shabaab & Madaxda NISA, oo ay sheegeen in ay halis ku tahay daganaanshaha Soomaaliya.
Previous articleDHAGEYSO:-Madaxweyne Waare oo deg deg ah bixiyay & halka amarku uu ku socdo